Warshadaha Shiinaha iyo Warshadaha Shiinaha ee T-bolt | Glorex
T-bolt clamp waa nooc ciriiri gareeya oo lagu dabaqi karo xididdada tuubada silikoon dhumuc weyn leh. Xarig-xireyaasha hadda aan haysanno waa: 19, 20, 26, 32, 38.
Xirmooyinka T-bolt waxay bixiyaan shaabadayn togan oo la isku halleyn karo oo leh cadaadis shaabadaysan oo xasillan iyo cimri dheelitiran.
Ku-qorista Stencil ama xarafka laser.
Baakadaha caadiga ahi waa baco, sanduuqa dibediintuna waa kartoon. Halkaa waxaa ku taal sumadda sanduuqa. Baakadaha bulsheed ee cad (Sanduuqa cad, sanduuqa midabka, sanduuqa midabka, sanduuqa caagga, iwm.)
Waxaan leenahay nidaam baaritaan oo dhameystiran iyo heerar tayo sare leh. Aaladda saxda ah ee baarista iyo shaqaaluhu dhammaantood waa shaqaale xirfad leh oo leh karti kormeer oo aad u fiican. Khad kasta oo wax soo saar ah waxaa ku qalabeysan kormeere xirfad leh.
Shirkadda waxay leedahay gaadiid badan oo gaadiid ah, waxayna sameysay xiriir iskaashi muddo dheer ah oo ay la lahayeen shirkadaha waaweyn ee loojistikada, Maddaarka Tianjin, Xingang iyo Dongjiang Port, iyagoo u oggolaanaya agabkaaga in lagu geeyo cinwaanka loogu talagalay si ka dhakhso badan sidii hore.
Aagga Codsiga ：
T-bolt clamp waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa codsiyo gariir iyo cod-weyn sida baabuurta culus, warshadaha, gawaarida, waraabka beeraha iyo mashiinada.
Faa'iidooyinka Tartanka Koowaad:
Qalabka loo yaqaan 'T-bolt clamps' ayaa adeegsada qaabab kala duwan iyo hanaan wax soo saar si loo haqabtiro baahiyaha noocyada kaladuwan ee tuubooyinka iyo tuubooyinka birta. Waxay leeyihiin xoog balaaran oo heer sare ah, adeegsi ku habboon iyo xoog xajin adag.
pc / kartoon
cabbirka kartoon (cm)
Hore: Xilliga gu'ga gu'ga
Xiga: Qalabka aan tooska ahayn ee garaaca tuubada buufinta
Xajiyeynta xargaha leh oo leh timo adag
Xaji isku shaandhaynta oo laba laab leh